Mogadishu Journal » 2020 » November » 16
Ra’iisul Wasaare Rooble oo kormeeray xarumaha heyaddaha Garsoorka dalka
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo maanta kormeer shaqo ku tagey xarumaha Caddaaladda iyo Garsoorka dalka ayaa sheegay in dowladdu ay xoogga saarayso tayaynta hay’adaha Garsoorka. Ra’iisul Wasaaraha ayaa tilmaamay in Xukuumaddiisu...
Muuse Biixi oo soo gebagebeeyey tartankii ciyaaraha gobolada Somaliland.
Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa soo gunaanaday tartanka kubbadda cagta gobollada Somaliland oo maanta lagu soo gebogabeeyey garoonka Hargeysa Stadium, kaasoo ay ku guulaysteen xulkii ka socday gobolka Daad-madheedh. Biixi oo ay wehelinayaan xubno kamid ah...
British PM says he is in ‘good health’ after coming into contact with someone who tested positive for coronavirus. 16 Nov 2020 British Prime Minister Boris Johnson says he is in “good health” after coming into contact with someone with COVID-19 and will drive the government via...
Guddoomiyaha cusub ee degmada Yaaqshiid oo xilka la wareegay (Sawirro)
Guddoomiyaha cusub ee degmada Yaaqshiid Axmed Cabdullaahi Cariif ayaa maanta si rasmi ah xilka ugala wareegey Guddoomiyihii hore ee Degmada Yaaqshiid Muuse Geesey Arrintan ayaa timid ka dib wareegto ka soo baxday xafiiska duqa Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Filish oo xilka looga...
Cumar Filish oo dhagax dhigay waddo muhiim ah oo isku xirta Labo degmo (Sawirro)
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Filish ayaa maanta dhagax dhigay Wadada Jaalle Siyaad oo Xiriirisa Isgoysyada korontada iyo Xoosh ee dhexmarta degmooyinka Wadajir iyo Dharkeynley taasoo dhererkeedu gaarayo illaa 4km. Wadadan oo ka...
C/raxmaan C/shakuur: ” Doorasho aan lagu wada qanacsanayn Xamar kama dhacayso”
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa wareysi uu bixiyey kaga hadlay Arrimaha Doorashooyinka Soomaaliya iyo caqabadaha illaa hadda jira. Waxaa uu sheegay C/raxmaan in qofkii doonaya inuu kursi Xildhibaanimo u tartamo la geynayo Xarunta Taliska...
Daahir Geelle: “Arrin aan labo sano ka hor ka diiday Farmaajo ayuu Wasiir Dubbe aqbalay”
Wasiirkii hore ee Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle ayaa ku eedeeyey dowladda Madaxweyne Farmaajo inay si aan wanaagsaneyn ula dhaqanto mucaaradka. Daahir Geelle oo sidoo kaled ka midx ah musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha dalka ayaa sheegay in...
Dhaawaca Henderson waxaa xaqiijiyay Southgate
Dhibaatooyinka dhaawaca Liverpool ayaa laga yaabaa inay sii kordhaan ka dib markii Jordan Henderson lagu qasbay inuu baxo intii lagu jiray guuldaradii England ee Belgium. Jordan Henderson ayaa laga reebay England guuldaradii 2-0 ee ka soo gaartay Belgium dhaawac dartiis - taasoo...
Manuel Merino announces resignation after a night of protests demanding his removal left two dead, dozens wounded. 16 Nov 2020 Peru’s interim president, Manuel Merino, has resigned less than a week into his new administration, after a night of protests calling for his removal and...
Alarm as Ethiopia’s Tigray conflict becomes internationalised
Rocket attack by Tigray forces on Eritrea marks major escalation as analysts warn protracted fighting will destabilise wider region and draw in more outside actors. 15 Nov 2020 Thousands of Ethiopian refugees have continued pouring into Sudan, escaping a worsening conflict that...
Golaha Shacabka oo maanta ka doodaya ansixinta xubnaha Guddiga adeega garsoorka Dalka
Xildhibaannada golaha shacabka ee barlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa berry oo isniin waxa ay kulan weynaha golaha ku yeelan doonaan xarunta ku meel gaarka ah ee Villa Hargeysa. Golaha ayaa waxaa ay doodi doonaan ajandayaaasha kala ah. U codeynta xubnaha guddiga...
Ciidanka Danab oo howlgal ku dilay Sh. Max’ed Suleymaan (Gacameey) & ilaalo la socotay
Howlgal ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ka sameeyeen degaanka Gamboole ee gobolka Sh/dhexe ayey ku dileen sarkaal ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab Saraakiisha Danab ayaa sheegay in howlgalkan uu ahaa mid qorsheysan ujeedkiisu ahaa baacsiga saraakiisha iyo...